I-FX-Heavy 'Blood Quantum' Amaconsi Ekuqhumeni Ekukhishweni Okumangazayo
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo I-FX-Heavy 'Blood Quantum' Amaconsi Ekuqhumeni Ekukhishweni Okumangazayo
by UTimothy Rawles April 28, 2020
by UTimothy Rawles April 28, 2020 1,018 ukubukwa
Kulokho omunye umgxeki akubiza ngokuthi “Kuyajabulisa futhi kumnandi njengesihogo” Igazi leQuantum uthole ukwehla okumangazayo kuShudder namhlanje ekuseni.
Njengengxenye ye- "Halfway to Halloween Month" yabo insizakalo yokusakaza inqume ukuthi kuzoba isikhathi esifanele ukuthumela le ntandokazi yomkhosi eyamukelwe kahle endaweni yabo yesikhulumi.
“Besazi ukuthi le filimu ibalulekile futhi ifike ngesikhathi ngesikhathi siyithola ngonyaka odlule, kodwa uma sinikezwa ngemicimbi yakamuva, Igazi leQuantumIzingqikithi zokuhlukaniswa, ukwesaba ukutheleleka, kanye nobuntu olwa nobungozi begciwane lomhlaba wonke sekuthuthuke kakhulu, ”kusho iMenenja Jikelele yeShudder uCraig Engler. "Ngenkathi umdlalo wezeshashalazi ungalawuleki ngenxa yobhadane lomhlaba wangempela, sanquma ukusheshisa ukwethulwa kwefilimu kaBarnaby ukuze izofinyelela ababukeli abaningi kakhulu."
Le filimu ilandela ubhadane lwabantu abashonile ababuye baphile eduze kwase- Isigodlo seMi'gmaq seRed Crow ngandlela thile esivikelekile kuso. UTraylor (Greyeyes), umphathi wamakhosi wesizwe, kufanele "avikele intombi yendodana yakhe ekhulelwe, ababaleki ababhubhisayo, futhi agodle iziqubu ezixukwini zezidumbu ezimhlophe ezihambayo."
UMqondisi uJeff Barnaby (Imilolotelo Yentsha Ghouls) ungumenzi wefilimu we-First Nations owazalelwa esiqiwini iMi'gmaq, lapho Igazi leQuantum ithatha indawo. Wenza umsebenzi ophindwe kane lapha njengombhali, umqondisi, umhleli, nomqambi. Amafilimu akhe ahlala esakazwa ngaphakathi komphakathi Womdabu futhi adwebe isithombe esigqamile nesesabekayo sempilo yomdabu yangemva kwekoloniyali namasiko - kulokhu, ukupenda ngegazi.
Igazi leQuantum ikhonjiswe ku-TIFF's Midnight Madness block ngo-2019 ngezibuyekezo ezinhle. Umgxeki we-iHorror uqobo uKelly McNeely ukusho ngemiphumela yonyaka, “Le yifilimu ebonakalayo engenza uTom Savini aziqhenye, nezikhathi ezihlonipha esinye sezigameko ezinesihluku Dawn of the Dead.